Profesoras | eactivo | Spanish for immigrants
Wasekelwa e Palma ababili nabafundisi Spanish njengoba olunye ulimi, Active in Spanish kuzalwa 2008, inhlangano non-profit kuhloswe ukuba lula ukuhlanganiswa abokufika edolobheni lethu ngokusebenzisa imfundiso Spanish. Eminyakeni emithathu kamuva, Active Spanish iba portal khulula for efundisa Spanish benomgomo ofanayo: ukusiza ukuhlanganisa ngemfundiso ulimi. Ukuze wenze lokhu uyothola lapha: umzimba owadalwa us, References ukuba emakhasini amanye ezihlobene imfundiso Spanish, izinsiza inthanethi utadishe wedwa futhi izixhumanisi amawebhusayithi ukwaziswa okuwusizo okungakusiza usuku nosuku.
I wanquma ukuchitha ngedwa kulo msebenzi 1998 ngemuva kokuqeda inkambo uthisha Spanish abafokazi International House Madrid. Ngawo lowo nyaka, ngathuthela San Francisco futhi yilapha lapho ngaqala uhambo lwami, Kwakuwuhambo nakho futhi ngafunda okuningi.
Ibhayisikobho 1998 kude kangaka ngiye ngaba nethuba ukufundisa ngeSpanishi eSpain nakwamanye amazwe. Ngenxa yalesi engiye mbeni namasiko ehlukene kanye nezindlela zokufunda eziye kwangenza bayaqhubeka bejabulela lokho ubungcweti.
In 2005 me mudé a Mallorca, Ngaqala ukusebenza lapho Ih Palma and wahlangana Begoña. Sasebenza ndawonye iminyaka emithathu futhi, ishukunyiswa isifiso sethu ukuhlola HORIZONS amasha career, in 2008 sanquma ukwakha i NGO, Active Spanish, ukuze asize ukuhlanganiswa of the eziyizifiki ngokusebenzisa imfundiso Spanish.
Ngemva konyaka ukhanda kwangenza ngaba Hanoi (Vietnam) ngakho kwadingeka ukuba uhlaziye nomqondo yethu yokujwayela NGO Internet, izindlela ukuthi sikwazi ukuqhubeka ukusebenza kusukela ebangeni. Umphumela Le nqubo website ye Spanish Active. Ngithemba wena ukuthole kuwusizo ngempela futhi imigomo yethu njengoba inhlangano zifeziwe.
Ibhayisikobho 2011 Ngaqhubeka ojikelezayo, ophilayo efundisa emazweni ahlukene. Kule minyaka engu-Ngisaqhubeka ukufundisa futhi ukusebenza kule sayithi, kodwa ngiye ngafunda okwengeziwe mayelana nendlela yokuthandaza ukuthuthukisa amawebhusayithi kanye nendlela ukusebenzisa herremientas web unikeza ngcono Ukufundisa nokufundwa engangibafundela.
Lapha une ezimbili izixhumanisi website yami Private, It ingenye mi blog on emazweni lapho bengihlala khona begodu omunye website yami efundisa nge Skype. Ngijabule kakhulu ngalokhu iphrojekthi entsha kodwa E-asebenzayo njengoba thina owangiphendula kuhle kakhulu, Ngenxa wonke!
In 1999 Ngenza ukuqeqesha othisha of Spanish njengoba olunye ulimi International House Barcelona. Ngangikuthanda futhi kusukela osukwini olulodwa Ngangazi ngangifuna ukunikezela ukuphila kwami ​​ukufundisa ngeSpanishi. In 2000 Ngathuthela San Francisco futhi angilifundiswanga khona cishe iminyaka emibili.
In 2002 I eSpain futhi waqala ukusebenza ngo International House Palma futhi efundisa Spanish. Lapho ngihlangana Delia e Palma 2005 We ukuxhuma ngokushesha futhi wabona ukuthi, Ngaphandle nakho ukwabelana, Wayephila phesheya emazweni amaningana ngisho ziye zasebenza esikoleni esifanayo e San Francisco, nakuba izinkathi ezahlukene, Saba Umbono ofanayo kakhulu ekufundiseni Spanish futhi bahlanganyela entshisekweni okufanayo emsebenzini wethu.
Ngenxa ubuchwepheshe obusha, Siye wayelokhu exhumana le minyaka ukuthi Delia uye waphila Hanoi futhi angikaze saphela ukwabelana imibono kanye namaphrojekthi. Siyathemba kakhulu ukuba bakwazi ukusebenza kule website nibone ukugcwaliseka izinjongo esaholela ukuba adale NGO yethu 2008.